IBanyana isemathubeni okuklonyeliswa kowe-CAF | Scrolla Izindaba
IBanyana isemathubeni okuklonyeliswa kowe-CAF
Nakulokhu umdlali wasemuva weBanyana Banyana, uNoko Matlou, kuphinde kwamhambela kahle ngesikhathi eshaya amagoli amabili benqoba ngo 3-1 bebhekene neZambia ngoMgqibelo.
Lo mdlalo, wobungani bamazwe omhlaba e-Milpark e-Bidvest Stadium, uyingxenye yamalungiselelo eBanyana emidlalweni yokuhlungela i-CAF Africa Women’s Nations ka-2022 ebekelwe lo nyaka. Umqhudelwano uzosingathwa yi-Morocco.
Umgadli oyisihlabani seBanyana uThembi Kgatlana, ushaye elinye igoli elibasizile ukuthi besondele ngamaphuzu ukuze bezonqoba.
UMatlou, uKgatlana kanye nomgadli u-Amanda Mthandi yibona kuphela abadlali abasuka phesheya kwezilwandle, umqeqeshi uDesiree Ellis akwaze ukubatholela imidlalo emibili yobungani ayekade eyihlelile.
NgoLwesibili ngehora le-3 ntambama, iBanyana izobhekana neBotswana emdlalweni wayo wokugcina ozodlalelwa enkundleni efanayo.
UMatlou weluleke abadlali bakuleli ukuthi bangalinge baphele amandla ngamaphupho abo.
“Ningalokothi niyeke ukukholelwa emaphupheni enu. Ngiyazi ukuthi akulula,” esho.
UMatlou waba ngumdlali wokuqala waseNingizimu Afrika ukuqokwa njengomdlali ovelele webhola lezinyawo wase-Afrika wonyaka ngowe-2008. Waya phesheya kwezilwandle wajoyina i-SD Eibar e-Spain ngoMfumfu wonyaka odlule.
“Ngonyaka odlule, bekumele ngiye e-China kodwa ngenxa ye-coronavirus lokho kuhamba akuzange kwenzeke. Kodwa ngibonga uThembi owangincoma njengomdlali oqavile njengoba sengiphila iphupho lami ngineminyaka engama-35 ubudala,” esho.
Lo mdlali odabuka e-Limpopo uqale umsebenzi wakhe wokudlala ibhola njengomgadli. Wathola umklomelo ngemuva kokushaya amagoli ayisithupha ku-African Women Championship.
Abavikeli asebemnkantshubomvu, kanye noKgatlana, kulindeleke ukuthi baqhubeke nokukhombisa izihlabani zebhola ezisencane ukuthi izinto zenziwa kanjani ngoLwesibili.